नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय भवन शिलान्यास, ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
आजको न्युज सोमबार, २३ असार २०७६
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ भवन शिलान्यास भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भवन शिलान्यास गरेकी हुन् ।
आगामी ३० महिनाभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भवन शिलान्यासका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले निर्धारित समयमै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सुझाव दिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले जवाफदेही पनि हुनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । बैंकले आफू र आफ्नो मातहतको वित्तीय प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनँको भनाइ थियो ।
आम सर्वसाधारणलाई वित्तीय पँहुचमा ल्याई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुक आर्थिक पुनर्निर्माणमा पनि जुटेकाले आर्थिक वृद्धिसहितको विकासमा लागेको बताए ।
केन्द्रीय बैंकहरुको पनि अभिभावक भएकाले स्वायतत्तासँगै जवाफदेहीता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकले लगानीमा वृद्धि गर्नुमात्रै नभई लगानीको प्रतिफलमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले बैंकले उचित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न उनले जोड दिए ।
गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालले राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षमतको विकास गर्दै सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सफल बनाउन काम गरिरहेको बताए ।
२०७६ साल असार २२ सम्म ७३० स्थानमा बैंक शाखा पनि विस्तार गरिसकेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको नयाँ भवन आगामी २०७८ भदौ सम्ममा बनिसक्ने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको सम्झौतामा आफ्नै लगानीमा बनाउन लागिएको हो । भवनको निर्माण जिम्मा सिगो सिमानान्तर जेबी कम्पनीले पाएको छ ।